दाता आश्‍वस्त पार्दै सरकार, चीनले ७६ अर्ब र जापानले २५ अर्ब दिने – YesKathmandu.com
दाता आश्‍वस्त पार्दै सरकार, चीनले ७६ अर्ब र जापानले २५ अर्ब दिने
बिहीबार १०, असार २०७२
काठमाडौं । भूकम्‍पीय क्षतिपछिको बृहत् निर्माणमा लाग्ने अनुमानित करिब सात खर्ब रुपैयाँको ठूलो हिस्सा दाताहरूबाट हासिल गर्ने अभियानमा सरकार आश्वस्त देखिएको छ। बिहीबार राजधानीमा हुने एकदिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि आएका ५५ मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूसँग अहिलेसम्‍म गरेका छलफलपछि विश्वास बढे पनि दाताहरूबाट राखिनसक्ने सर्त सम्‍बोधन गर्न अन्तिम क्षणमा समेत सरकार जुटेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासाथै विभिन्न मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुता, खर्च गर्ने क्षमताको प्रतिबद्धतासँगै दाताहरूबाट आउने हरेक रकम पारदर्शी हुने र निर्धारित कार्यक्रममै खर्च गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग जुटाउने उद्देश्यले हुन लागेको दाता सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजका रूपमा प्रकोपको मूल्यांकन र आवश्यकता पहिचान पीडीएनए प्रतिवेदन हुनेछ। पीडीएनएले क्षतिको समग्र अवस्था बाहिर ल्याएको छ।
क्षेत्रगत आधारमा भएका क्षति, भूकम्पपछिको नोक्सान, पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक रकमको प्रस्ट चित्रण पीडीएनएले देखाएको छ।
अर्थतन्त्रमा भूकम्पको प्रभाव सात खर्ब ६ अर्ब ४६ करोड १० लाख रुपैयाँ छ। पुनर्निर्माणमा ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विश्वसनीय सूचकका आधारमा यो प्रतिवेदन तयार पारिएको सरकारले दाबी गरेको छ। पीडीएनएन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि भूकम्पबाट भएको क्षतिको वास्तविक तस्बिर दाताले थाहा पाउने सरकारको ठम्याइ छ ।
चीनले ७६ अर्ब र जापानले २५ अर्ब दिने
छिमेकी चीनले नेपालको पुर्नस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि आगामी दुई वर्षभित्र ७६ अर्ब ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ सहायता उपलब्ध गराउने भएको छ ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेसँग अलगअलग भेटी बुधबारै चिनियाँ विदेशमन्त्रीले यसबारे जानकारी गराएका हुन् ।
जापानले नेपालको पुनर्निर्माणका लागि २५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सम्मेलनका क्रममा गर्ने भएको छ । छिमेकी भारतका तर्फबाट पनि चीनकै हाराहारीको सहयोग रकम घोषणा हुने सरकारी स्रोतले जानकारी दियो ।
चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बिहीबार हुने अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्निर्माण सम्मेलनमा नेपालका लागि उक्त सहायता घोषणा गर्ने भएका हुन् ।
चीनका तर्फबाट नेपाललाई दिइने यो नै हालसम्मको उच्च सहयोग हुनेछ । यसअघि राष्ट्रपति डा यादवको चैतमा सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा १४ अर्ब रुपैयाँको सहायता चीनले नेपाललाई दिने घोषणा गरेको थियो । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।
प्रदेशमा पनि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउँने सहमति
चुनाव गराउने पक्षमा सरकार देखिएन् ः सचिव भट्टराई
राष्ट्रपतिले भने, सुशील‘दा’ कुन पार्टीको सभापति हो ? परिवार दल कि नेपाली कांग्रेस !
निधिको गृहजिल्ला धक्का, तीन गाउँ र नगरको वडा अध्यक्षमा ४ एमाले उम्मेद्धार बिजयी
राष्टपतिको निर्वाचनअघि नै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन तालिका तयार गर्न निर्देशन
डा. गोविन्द केसीका माग संसदभित्र प्रवेश, गगन थापाद्धारा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता
वर्षमान दम्पत्तीले मतदान गर्दा महरा किन गएनन् ?